हेर्नुहोस् आजको विदेशी विनिमय दर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हेर्नुहोस् आजको विदेशी विनिमय दर
काठमाडौँ । आज शुक्रबार पनि अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ। आज एक डलरको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ६७ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। हिजो बिहिबार डलरको भाउ १ सय १० रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको थियो।
त्यस्तै दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ०५ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ २० पैसा छ।
साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ६७ पैसा छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३९ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ।